Maitiro ekuchenesa WhatsApp kuti riite zvirinani | IPhone nhau
Maitiro ekuchenesa WhatsApp kuti riite zvirinani
WhatsApp, iko iko kutumira mameseji chikumbiro par kugona muSpain uye kutenderera pasirese. Kunyangwe paine vakwikwidzi vakakodzera vakaita seTeregiramu, Facebook Messenger kana WeChat, iyo ngano WhatsApp inoramba isinganzwisisike semutungamiri asina kupokana wekutumira mameseji nezvimwe zvakawanda, uye iko kunyorera kunotibvumidza kuita mafoni efoni kubva kuvashandisi vanosvika vasere, vaizotiudza . Zvisinei, kukurumbira kwekushandiswa kweWhatsApp iko kugona kugovana zvirimo uye nehumwe hunyanzvi hwekushandisa unoiita murwi mukuru wemarara, zvinhu izvo isu zvatisingade uye izvo zvinononoka kunyorera nenzira imwecheteyo yavanotora yekuchengetedza pane yedu iPhone.
Nhasi tinoda kukudzidzisa iwe kuchenesa paWhatsApp pamwe nekunyepedzera kudiki kuitira kuti zvirege kuitika zvakare.
1 Zvidobi zvekuchengeta WhatsApp yakachena
1.1 Dzima otomatiki kurodha pasi ipapo
1.2 Dzivirira mapikicha kubva mukuchengetedzwa paKamera Roll
2 Maitiro ekuchenesa WhatsApp
2.1 Misa kubviswa kwezviri mukati
3 Sarudza zvemukati zvatinoda kudzima
Zvidobi zvekuchengeta WhatsApp yakachena
Chinhu chakakosha kutanga imba nenheyo. Hazvibatsiri zvishoma kuti tiite zvinotevera kuchenesa kana tisina pfungwa dzakakosha uye dzakakosha kuti tigone kuchengeta yedu WhatsApp yakarairwa zvakanaka uye kure nezvinhu zvisina basa. Ndiani uye ndiani asingagamuchire mapikicha anogara aripo, maGIF ane hupenyu asingape chero chinhu, mamirioni e "emanyepo" maaudio uye akakura akasiyana ezvinyorwa izvo zvisiri izvo chete zvisina basa, asi zvakare inotora nzvimbo munzvimbo yedu yekuchengetera nenzira isina musoro.
Dzima otomatiki kurodha pasi ipapo
Nhanho yekutanga, yakakosha pakuisa WhatsApp uye zvinosuwisa kuti vazhinji havazive nekuti havana kumbopinda mukumisikidzwa kwechishandiso ichi. WhatsApp ine otomatiki zvemukati kurodha inogoneswa nekutadza uye ichi ndicho chinhu chekutanga chaunofanira kuita. Hazvina musoro kuti dzishandiswe patinoona kuti mapoka mazhinji anotambira mameseji mazhinji zvekuti hazvigone kuti averenge ese, Naizvozvo, une mifananidzo mundangariro yeiyo iPhone yausati wamboona. Heano maitiro ekudzima:
Sarudza sarudzo "Dhata uye chengetedzo".
Muchikamu "Otomatiki kurodha pasi faira" inova yekutanga kuwanikwa, sarudza "Kwete" mune iwo mafaera ayo iwe ausingade kuenderera otomatiki kurodha zvirimo, iwe une mifananidzo, mavhidhiyo, audios uye zvinyorwa zviripo.
Dzivirira mapikicha kubva mukuchengetedzwa paKamera Roll
Imwe yedzidziso dzinotyisa idzo dzinogona kukonzerwa neWhatsApp ndeyekuti mifananidzo nemavhidhiyo aya akadhirowewa anopedzisirawo akananga mu "Camera Roll" ye iPhone, iyo zvino yatsiviwa ne "Mifananidzo" tab kana iyo "Recent" album. Izvi zvinoreva kuti kana iwe uchida kuona pikicha yawakatora zhizha rapfuura unofanirwa kufamba pakati pemazana ezvematongerwo enyika ari pabasa kana pikicha yemukwasha wemangwanani. Usatombo kunetseka, iwe unogona kudzivirira WhatsApp mapikicha kubva kuchengetwa pamupumburu seizvi:
Sarudza sarudzo "Nhaurirano" mukati meiyi menyu.
Dzinga sarudzo «Sevha kuMapikicha».
Iyi sarudzo inogoneswa nekukasira uye zvinoita kwandiri kunge imwe yeanorota zvakaipisisa emushandisi weiyo iOS uye chikonzero chikuru nei vanhu vachivenga mapikicha paWhatsApp. Nditende, hupenyu hwako hunozoita nani kana iwe watevera aya maviri akareruka matipi, asi ikozvino tinoenda neakaoma, ekuchenesa mabasa.
Maitiro ekuchenesa WhatsApp
Kana tangojekesa nezve zvambotaurwa, isu tinofanirwa kupfeka magirovhosi edigital, kuzvishongedza nemoyo murefu uye kutanga basa rinozotenderera zvakanyanya kuti wakamboshandisa here kana kwete matekiniki ataurwa. Kana iwe uine otomatiki kurodha pasi kumisikidzwa pamwe neiyo "Sevha kuMifananidzo" basa, ini ndinokurudzira kuti uzvishongedze nemoyo murefu uye chengetedza yako iPhone isati yaguma kugumurwa pamadziro. Izvo zvakati, tinodzika kubhizinesi.
Misa kubviswa kwezviri mukati
Vagadziri veWhatsApp vakatotora dambudziko iri kufunga, saka vaita mashandiro anotibvumidza isu kubata nemazvo nzira yatinoshandisa yedu yekuchengetedza. iPhone yeWhatsApp uye chokwadi ndechekuti inoshanda chaizvo. Kuti uwane chikamu ichi tinotevera nzira inotevera:
Isu tinopinda muchikamu "Kugadzika".
Dzvanya pachikamu "Dhata uye chengetedzo".
Takasarudza sarudzo "Kushandisa kwekuchengetedza".
Iye zvino rondedzero ichavhurwa inoenderana nehurukuro dzese dzatakavhura kana kudura muWhatsApp uye Izvo zvinotizivisa nezve huwandu hwakazara uhwo hurukuro inogara mundangariro medu, pamwe nekudoma yega yega mhando yefaira kutsanangura huwandu hwayo. Tichakwanisa kusiyanisa pakati pezvose zvirimo:
Kana tikabaya pazasi panoti "Manage ..." neruvara rwebhuruu tinokwanisa kudurura iyo chaiyo nhaurwa yezvirimo zvatinosarudza. Nekudaro, isu tinofanirwa kuziva kuti ichabvisa zvese izvi zvemukati, pasina kusarura izvo zvinotifadza kana kwete, iyi ndiyo nhanho yakanyanya kutemesa kumhanyisa (uye inonyanya kushanda kutanga hupenyu hutsva ).
Sarudza zvemukati zvatinoda kudzima
Kana kune rimwe divi isu tichida kuita kuchenesa kwakanyanya nekuti tine mimwe mifananidzo nemavhidhiyo atakatambira neWhatsApp ayo atinodisisa kana kuti iyo yatinoda kuchengeta, kungave mundangariro dzeWhatsApp kana mune iyo yeyedu kifaa, isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinopinda muWhatsApp hurukuro sezvatinowanzoita.
Dzvanya pachikamu chepamusoro, panowanikwa zita remubatanidzi kuti uwane chikamu che "Contact info", kana "Group info" kana zvirizvo.
Isu tinosarudza iyo sarudzo "Mafaira, zvinongedzo uye maHTML."
Iwindo rinowoneka iro rinotibvumidza isu kutarisira aya mafaera. Kana isu tichida kuita yakasarudzika sarudzo, tinya pa "Sarudza» kumusoro kurudyi kusarudza mapikicha rimwe nerimwe kana kusvetedza munwe wako pamusoro pavo kuti uzviite nekukurumidza.
Iyi sarudzo yekusarudza inogona kushandiswa zvese kubvisa (nekudzvanya marara anogona icon pazasi kurudyi) Tingaite sei kuti tichengetedze iyi mifananidzo? Mukushandisa kwedu Mifananidzo, nekuda kweizvozvo isu tinongofanirwa kuvasarudza, tinya bhatani re "Kugovana» ​​pazasi kuruboshwe uye sarudza sarudzo «Sevha iyo X mifananidzo». Tichakwanisa kudzima mafaera ese uye ma link akagamuchirwa uye magwaro akagamuchirwa (kwete ma audios, zvitupa nezvimwe zvirimo).
Isu tinovimba isu takakubatsira iwe kuti uite kunyatso kuchenesa yako WhatsApp uye Rangarira, iyo inonatsa zvakanyanya haisi iyo inonyanya kufarira, asi iyo inosvibisa zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuchenesa WhatsApp kuti riite zvirinani
Tichaona yakagadziriswazve multitasking yePhones muIOS 14?
120Hz skrini, 3x zoom uye kugadzirisa muFace ID ichave mamwe emitambo yeiyo iPhone 12